सबैभन्दा स्मरणीय र रोमाञ्चक को एक - उपन्यास "हाम्रो समय एक हिरो" मा बेला को चित्र। गर्व स्वभाव, आफ्नो परम्परा वफादार, सबै निष्कपटता मा, selflessly प्रेम गर्न सक्ने क्षमता - यी रोमान्टिक Undine र सांसारिक सौन्दर्य मरियम को काम गर्न विरोध यो चरित्र मुख्य गुणहरू छन्।
को narrative को peculiarity
केटी को दुखद भाग्य काम पहिलो अध्याय। वर्णन घटनाहरू मा एक unwitting सहभागी भइन् सरल र दयालु मानिस, - बेला गरेको उपन्यास "को हाम्रो समय हिरो" को छवि उनको Maksimom Maksimychem को धारणा दिएको छ। तिनीहरूले भेट केही महिना भित्र उहाँले राजकुमारी को वर्ण थाहा पायो र काकेशस उनको प्राण संलग्न भएको छ। किनभने यो "गरिब" Circassian गर्न कहानी न्यानोपन र दया भरिएको छ। उहाँले एक जवान अधिकारी आए जो Terek परे पनि फोर्ट, सेवा कसरी सम्झन्छन्। Pechorina Grigoriya Aleksandrovicha को उद्भव र चाँडै दुःखद घटनाहरु को कारण थियो।
त्यसैले यो एक रोमान्स कथा Circassian मिखाइल Lermontov मा प्रवेश गर्छ।
"बेला": नायक प्रेम को एक सारांश
सांसारिक राजकुमार, तातार परिचित मैक्सिम Maksimych रूसी अधिकारीहरु विवाह प्राचीन छोरी निमन्त्रणा। छुट्टी समयमा Petchorin कान्छो राजकुमारी ध्यान आकर्षित। पातलो, अग्लो, गाढा-आँखाहरू, सोह्र - उपन्यास एम Lermontov को सुरुमा केटी वर्णन गर्दछ। बेला तुरुन्तै Grigory यसको सौन्दर्य र अनुग्रह मारे। त्यो बारी मा, पनि एक जवान याद र तिनलाई माथि जाँदै, एक प्रशंसा गरे गीतहरू को फारम। Pechorin को Mountaineers को परम्परा परिचित थियो, तर यहाँ सबै मामला निर्णय गरिएको छ।
Maksim Maksimych तरोताजा आए र कुराकानी सुने। Kazbich, क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो घोडाहरू को विजेता, राजकुमार आफ्नो Karagöz र Azamat, छोरा प्रशंसा उहाँलाई घोडा दिन उक्साए। उहाँले पनि रुन थाले, र त्यसपछि आफ्नो बहिनी चोरी गर्न घोडा लागि विनिमय मा प्रस्ताव राखे। Kazbich दृढ रह्यो, र तिनीहरूलाई बीच भ्कगडा। एक Maksim Maksimych, कहिल्यै अन्त कसरी हुन सक्छ कल्पना कुराकानीमा सुन्न Pechorin बारेमा, कुरा। Grigoriy Aleksandrovich त्यसपछि हाँसिन्, र उहाँले अप कुरा थियो - Lermontov बताए। बेला उहाँले पछि स्पष्ट रूपमा उहाँले पट्टाइ र निराशाले देखि एउटा उम्कने कथित थियो।
सबै Inconstant, संसारको थकित, हरेक तरिका मा एक जवान अधिकारी जीवनमा अर्थ फेला पार्न प्रयास। उहाँले पहिलो राजकुमारी देखे, यो उहाँले थाह जसलाई सबै बालिका, जस्तो गरे देखिन्थ्यो। Naturalness र बहाना नसक्नुको - यी कि, सौन्दर्य बाहेक, यो Pechorin देखे गुणहरू छन्। बेला Karagöz लागि विनिमय मा: र Azamat को गढ मा देखा गर्दा Grigoriy Aleksandrovich उहाँलाई एक सम्झौता प्रस्ताव राखे। त्यो क्षण मा जवान त्यो अन्त उहाँलाई भाग्य पठाउनुहुने एउटा दूत थियो पक्का थियो। सायद लेखक यस्तो विचार कहिलेकाहीं आफू र अन्य amused कि जोड गर्न चाहनुहुन्छ "हाम्रो समय नायक।" Bela घरमा नै रात Grigory थियो। र Kazbich भेडा गढ Azamat मा चलाए गर्दा अर्को दिन, Karagöz चोरेछ र थप त मा घर देखा थिएन।
मैक्सिम Maksimych पहिलो कार्य जवान अधिकारी रिसाउँछन् र त्यो बालिका आमाबाबुको फिर्ती मा जिद्दी। बेला यस किले मा रहेका: यी थिए त लेखक अनुसार, "हाम्रो समय नायक" - तर Pechorin बाहिर दृढ हुन गरियो।
, गर्व स्वतन्त्र, आत्म-सम्मान को एक जन्मबाट प्राप्त अर्थमा संग - लामो समय को लागि हेरोइन रूसी अधिकारी आज्ञा पालन गर्न चाहेनन्। यो अक्सर दुःखी छ र आफ्नै भाषामा गीतहरू गाए। बोल्ने उनको मानिसहरूलाई अपरिचित एक विदेशी भाषा। त्यो कुनै पनि लुगा वा महंगा गरगहना परीक्षा थिएन, त्यसैले अन्य महिला प्रेम गर्नुभयो। को Mountaineers र insulted Pechorin बेला कार्य को व्यवस्था वफादार लामो उनको अपहरणकर्ता अस्वीकार गर्नुभयो। Maksim Maksimych यी दिन तुलना यो जंगली सल्फ्युरिक, स्वतन्त्रता-मायालु र विद्रोही संग। आँखा नै जल Embers जस्तै Circassian। वास्तवमा, तिनीहरू सास्ती हेरोइन प्रश्नहरूको त्यहाँ जवाफ फेला पार्न प्रयास, एक प्राण जस्तो। र पनि यो बुझेर आफ्नो rebelliousness हेरोइन थप inflamed Pechorin बिना। विद्रोही Gorjanki कुनै पनि लागत जित्न: अब उनले लक्ष्य गए। सबै प्रयासमा निरर्थक हो कि देखेर Pechorin चाल गए - "। हाम्रो समय नायक" यी पनि को लेखक को लागि शायद थिए
Lermontov बिस्तारै उनको मनमा परिपक्व महिलाहरु को एक अर्थमा भन्ने देखाउँछ। Circassian बिस्तारै Grigory देख्यो जब क्षणमा थिए। त्यो उहाँले भरोसा थियो भने, रूसी भाषा बुझ्न सिकेका छ। तर गर्व र Highlanders उठाउनु उसको भावना देखाउन अनुमति थिएन: इस्लाम एक मानिस एक यस्तो जडान लागि अनुमति छैन। र जवान अधिकारी sobbing, बेला गर्न बिड विदाई सधैंभरि उहाँलाई कैदी प्रेम यसलाई स्पष्ट मेड जब बस क्षणमा, त्यो मानिसको घाँटी गर्न हतारिएको।
बेला गरेको उपन्यास "को हाम्रो समय हिरो" को छवि पाठक गरेको प्रशंसा र दया बनाउँछ। आफैलाई हेरोइन आफूलाई समर्पित भंग आफ्नो पहिलो प्रेम। आफ्नो भावना, निष्कपट र हृदयस्पर्शी मा मैक्सिम Maksimych अनुसार, त्यो सुन्दर थियो: उनको गाल मा एक शरमाना glowed र रमाइलो र ठट्टा उनको स्थिर साथीहरू भए। यो सम्म Pechorin आफ्नो dzhanechke चासो हराएको छैन, चार महिनाको लागि गयो। उहाँले मैक्सिम Maksimych स्वीकार गरेपछि, कि यो बाहिर जान्छ रूपमा, धेरै एक महान महिला प्रेम भन्दा राम्रो Circassian प्रेम। जवान मानिसहरू झन् घर देखि टाढा हुन थाले, र फिक्का र दुःख संग फिर्ता देख्यो जो बेला, अगाडि, आँसु glistened। र शब्द उनको विश्वस्त सकेन को कुनै राशि, Grigoriy Aleksandrovich उनको अझै पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। तर पनि यस्तो क्षणमा, त्यो राजकुमार छोरी थियो बेला बिर्सनु भएन। एक परित्यक्त स्त्रीको भूमिका मा महसुस गर्न ताकि, छोड्न तयार, testified जन्मबाट प्राप्त गर्व - जोड Lermontov।
"बेला": एपिसोड सारांश को मृत्यु
एक पटक अधिकारीहरु को गढ टाढा गएका थिए। यो दिन मा, Circassian Kazbich घोडा को हानि स्वीकार गर्दैन बदला लिन एक साधन भए। उहाँले तल नदी जान एक्लै केटी चोरेछ। र म mortally सुन्दर छाती मा एक चुपी plunging द्वारा घाइते पीछा, पत्ता लगाउन।
को हेरोइन को भाग्य थप दुई दिन जारी। बेला गरेको उपन्यास "को हाम्रो समय हिरो" सुरुदेखि को छवि पूर्वी मान्छे को परम्परा समर्पण embodies। मरिरहेका, त्यो कहिल्यै आफ्नो प्रिय एकछिन भूल र आफ्नो प्राण अन्य संसारमा पूरा गर्नुभएको इच्छा। तर मैक्सिम Maksimych उनको मसीही विश्वास स्वीकार गर्न निम्तो गर्दा सौन्दर्य मना गर्यो। त्यो मुसलमान परम्परा अनुसार उठाएको, र आफ्नो घर र मानिसहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ छैन।
उपन्यास "हाम्रो समय को हिरो" मा बेला को छवि lightest र निर्दोष छ। केटी जीवन अरूलाई निर्भर: उनको भाइ धोका हुनेछ पिता Pechorin शोषण। कहानी मा Circassian सानो र केवल Maksimom Maksimychem सञ्चार कहिलेकाहीं Grigoriy Aleksandrovich उनको मायालु रोकियो भनेर complains भन्छन्। तर आँखा र बेला कार्यहरूको विवरण उनको मन मा जा के को पूर्ण तस्वीर दिन्छ। र पाठक आदर र प्रशंसा कल बहाना गर्न नसक्नुको संग मिलेर भावना को निष्कपटता।
सजिलै र योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता अन्य मानिसहरूको भाग्य मा हस्तक्षेप र तिनीहरूलाई तोड्न सक्नुहुन्छ - Lermontov बारम्बार विशिष्ट छवि जोड छ - निष्कर्षमा हामी यस्तो Pechorin "हाम्रो समय नायक" भन्ने तीता देखि कहानी पढेपछि खडा याद गर्नुहोस्।
उपन्यास "पिता र छोराहरू" मा Turgenev छ द्वारा Bazarov को छवि
हामी आलस्य बारेमा भन्दै रूसी बुझ्ने?
सामान कम्प्युटर: विवरण र छनौट सुझावहरूको
Studded टायर। नयाँ studded टायर चलिरहेको
रूस मा सबै भन्दा ठूलो रोटे पिङ उचाइ के हो?
व्यापार भन्सार। अर्थ र आवेदन
एक बच्चाको कोठा संग रेस्टुरा - एक स्वादिष्ट र रमाइलो ठाउँ
विली Messerschmitt: जर्मन विमान को जीवनी